သင့်ရဲ့ကလေး ကျောရိုးကောက်ကွေးခြင်းအတွက် ခွဲစိတ်မှုလိုအပ်ပြီလား။ - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
မတ် 29, 2017 Prof.Emeritus Charoen Chotigavanich, M.D.
ကျောရိုးကောက်ကွေးနေခြင်းသည် ကျောရိုးမကြီးသည် ဖြောင့်တန်းမှုမရှိပဲ ဘယ်ညာသို့ ကောက်ကွေးနေခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ကျောရိုးကောက်ကွေးခြင်းသည် များသောအားဖြင့် ကလေးများ ကြီးဖော်ဝင်ချိန်တွင် အများဆုံးတွေ့ရသည်။ ကျောရိုးကောက်ကွေးခြင်း ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းတရားအများစုမှာ ကြွက်သားသိမ်နေခြင်း၊ မွေးရာပါ သို့ မွေးပြီးနောက်ပိုင်း ဦးနှောက် အာရုံကြော ချို့ယွင်းခြင်း နှင့် အခြား ကြွက်သားဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုအခြေအနေများကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
ကျောရိုးကောက်ကွေးခြင်း အကြောင်းတရားများကို သေချာမသိရှိနိုင်သေးပေမယ့် အောက်ပါအချက်အလက်များဟာ ရောဂါဖြစ်နိုင်စေတဲ့ အန္တရာယ်များလို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။
• ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုမြန်ခြင်း (လူပျိုဖော် အပျိုဖော်ဝင်ချိန်တွင်၊ အထူးသဖြင့် အသက် 9နှစ် မှ 15နှစ်အတွင်း)
• မျိုးရိုးလိုက်ခြင်း (ဥပမာအားဖြင့် မိဘများတွင် ခါးရိုးကောက်ကွေးရောဂါရှိခြင်း)
• ကြွက်သားနှင့် အာရုံကြောဆိုင်ရာ အခြေအနေများ (မွေးရာပါ သို့ မွေးပြီးနောက်ပိုင်း ဦးနှောက် အာရုံကြော ချို့ယွင်းခြင်း)
• မွေးရာပါ ခါးရိုးထိခိုက်ဒါဏ်ရာရခြင်း
• ကျောရိုးရှိ အာရုံကြောမကြီး ဒါဏ်ရာရရှိခြင်းများ
• ပခုံးနှစ်ဖက် မညီခြင်း (တစ်ဖက်ဖက်က ပို၍မြင့်နေခြင်း သို့ ပို၍ထိုးထွက်နေခြင်း)
• ခါးနှစ်ဖက် မညီမျှခြင်း
• တင်ပါးဆုံရိုးသည် အခြားတစ်ဖက်ထက်မြင့်ပြီး စောင်းနေခြင်း
အကယ်၍ သင်၏ကလေးတွက် ထိုလက္ခဏာများမှ တစ်ခုခု တွေ့ရှိနေရပြီဆိုပါက သက်ဆိုင်ရာသမားတော်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါသည်။ ကျောရိုးကောက်ကွေးခြင်းသည် တဖြေးဖြေးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံ ရှာဖွေတွေ့ရှိရန် ခက်ခဲပါသည်။ ကျောရိုးအနေအထားနှင့်ပက်သက်ပြီး သံသယရှိပါက ထိုအခြေအနေကို ဆက်လက်ရှာဖွေရန် အရေးကြီးပါသည်။ ယောကျာ်းလေးနှင့် မိန်းကလေးတို့တွင် ရောဂါရရှိနိုင်ခြေ အတူတူရှိသော်လည်း မိန်းကလေးများတွင် ပိုဆိုးသည့် အခြေအနေနှင့် ကုသရန်လိုအပ်မှုတို့ကို ပိုမိုတွေ့ရှိရပါသည်။ ဆိုးရွားသည့် ကျောရိုးကောက်ကွေးခြင်းကို မကုသပဲ ထားရှိပါက အောက်ပါအခြေအနေတို့ဖြင့် ကြုံရနိုင်ပါသည်။
• အဆုတ်နှင့် နှလုံးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဆောင်တာများ ချွတ်ယွင်းခြင်း – မညီညာသော ကျောရိုးသည် နံရိုးအိမ်အား ထိခိုက်မှုရှိပြီး အတွင်းရှိ အဆိုပါ အင်္ဂါများ၏ လှုပ်ရှားမှုနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ထိခိုက်စေပြီး သွေးလည်ပတ်မှုနှင့် အသက်ရှုခြင်း လုပ်ခန်းဆောင်တာကို ပိုမိုခက်ခဲစေနိုင်ပါသည်။
• ပုံပန်းသဏ္ဍာန်အားဖြင့် သိသာသော ပြောင်းလဲမှုများ – အကယ်၍ ကျောရိုးသည် ဆက်လက်ကောက်ကွေးနေပြီး ပုံမှန်ထက် ထိုးထွက်ကြီးထွားလာမည်ဆိုပါက လူတစ်ယောက်၏ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။ မတူညီသော ပခုံးနှစ်ဖက်၊ မတူညီသော တင်ပဆုံနှစ်ခု သို့ မတူညီသော ခါးနှစ်ဖက်တို့ဖြစ်စေနိုင်ပြီး လူတစ်ယောက်အတွက် မသက်မသာ ခံစားရနိုင်ပါသည်။
• ခါးနာခြင်း – ကျောရိုးကောက်ကွေးခြင်း ရှိသော ကလေးငယ်များသည် နာတာရှည် ခါးနာရောဂါကို အရွယ်ရောက်ချိန်တွင် ပိုမိုခံစားရနိုင်ပါသည်။
အခြေအနေ အရမ်းမဆိုးသော ကျောရိုးကောက်ကွေးခြင်းတွင် ဆရာဝန်သည် လူနာအား ကျောရိုးထိန်းကွင်းတပ်ခြင်းအား အကြံပြုနိုင်ပါသည်။ ထိုအခြေအနေတွင် ကလေးငယ်သည် ကျော၏ ကောက်ကွေးမှုပုံစံ ပိုမိုဆိုးရွားလာခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အထိန်းကွင်းကို တပ်ဆင်ထားရပါမည်။ ထိုကဲ့သို့သော လူနာများတွင် ကုသမှုကြီးကြီးမားမား မလိုအပ်သေးပါ။ အရမ်းဆိုးရွားသော အခြေအနေတွင်သာ ခွဲစိတ်ကုသမှုပေးရန် အကြံပြုထားပါသည်။ အကယ်၍ အထိန်းကွင်းတပ်ခြင်းဖြင့် မသက်သာပဲ ပိုမိုဆိုးရွားလာပါက ခွဲစိတ်ခြင်း ပြုလုပ်ရန် အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။ ခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်လာပါက ဆရာဝန်သည် လူနာ၏အသက်အရွယ်ကို ထောက်ရှုစဉ်းစားပြီး ခွဲစိတ်ရန်လို မလို ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မည်။ မိဘများတွင် ကျောရိုးကောက်ကွေးခြင်း ခံစားရဖူးခြင်း ရှိ မရှိကဲ့သို့သော အခြေအနေမျိုးကိုလည်း ထည့်သွင်း စဉ်းစားပါလိမ့်မည်။
ကုသရန်အတွက် ရွေးချယ်စရာအချို့ရှိပါတယ် သို့သော် များသောအားဖြင့် ခွဲစိတ်ကုသမှုတွေမှာ ကျောရိုး၏ကွေးကောက်မှုတိုးတက်စေလို့တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ပုံပျက်နေတဲ့ကျောရိုးကို တင်ပဆုံ သို့မဟုတ် သေဆုံးသွားသူတို့ထံမှ အရိုးဖြင့် ဝက်အူ နှင့် စတီးချောင်းတို့ကို အသုံးပြုကာ ပုံပျက်နေတဲ့ ခါးရိုးတစ်လျောက် တွယ်ဆက်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ ခွဲစိတ်မှုဟာ နက်နဲရှုပ်ထွေးပြီး အချိန်တော်တော်ကြာ ယူရပါတယ်။ အဆိုပါ တွယ်ဆက်လိုက်တဲ့ နေရာမှာရှိတဲ့ အရိုးရဲ့ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုဟာ ရပ်တန့်သွားနိုင်တာမို့ များသောအားဖြင့် ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးနေဆဲ ကလေးငယ်တွေမှာ သုံးလေ့ မရှိပါဘူး။ ဒီလိုအခြေအနေမှာ ဝက်အူတွေကို အသုံးမပြုပဲ စတီးချောင်းတွေဟာ ခါးရိုးတစ်လျှောက် တိုက်ရိုက် အတူတွဲချည်ထားလေ့ရှိပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့ ခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ပြီးနောက် အချိန်ပြည့် အထိန်းကွင်းတပ်ထားခြင်းကို ပြုလုပ်ရလေ့ရှိပါတယ်။
အကယ်၍ သင်၏ကလေးတွင် ကျောရိုးကောက်ကွေးခြင်း ခံစားနေရသည်ဟု သံသယရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေးပြီး ကောက်ကွေးခြင်းကို ရပ်တန့်အောင် အမြန်ဆုံး ကုသမှုခံယူသင့်ပါသည်။
Mayo Clinic: Scoliosis. Accessed from: http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/scoliosis/basics/definition/con-20030140. Accessed August 15, 2015.
Kid’s Health: Scoliosis. Accessed from: http://kidshealth.org/kid/health_problems/bone/scolio.html. Accessed August 18, 2015.
သင့်ရဲ့ကလေး ကျောရိုးကောက်ကွေးခြင်းအတွက် ခွဲစိတ်မှုလိုအပ်ပြီလား။ ကျောရိုးကောက်ကွေးနေခြင်းသည် ကျောရိုးမကြီးသည် ဖြောင့်တန်းမှုမရှိပဲ ဘယ်ညာသို့ ကောက်ကွေးနေခြင်းကို ဆိုလိုသည်။